२०७७ बैशाख, ३
वैशाख ३, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा पछिल्ला दिनमा मानिसको आवतजावत बढीरहेको छ ।
दैनिक नै एकदर्जन बढी एम्बुलेन्स त्यहाँ पुग्छन् । केही समय बस्छन् लगत्तै फर्कन्छन् ।कहिले नेपाली सेनाका सवारी पुग्छन त कहिले सशस्त्र प्रहरी बलका । कहिले नेपाल प्रहरीका सवारी हान्निँदै पुग्छन् ।
वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पतालका एम्बुलेन्स पनि उत्तिकै पुग्छन् । एम्बुलेन्स किन गएका होलान् भनेर जिज्ञासा पनि आमरूपमा उत्पन्न हुन सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले तय गरेको मापदण्ड विपरित गएर भने विश्व विद्यालय परिसरमा कुनै भीडभाड गरिएको छैन । आखिर के छ त ? विश्व विद्यालय परिसरमा ।
जवाफ सहज छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउने लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती कमाएका महावीर पुनले विश्वविद्यालय परिसरमा नै केन्द स्थापना गर्नु भएकोछ । केन्द्रमा आजकल दैनिक २० जना दिन रात नभनी काम गरिरहेका छन् । केन्द्रका प्रमुख पुन पोखरामा छन् तर उनी पोखरामा रहेको भान कोही कसैलाई पनि छैन ।
केन्द्रमा भइरहेको कामकारवाहीको बारेमा उनले श्रव्यदृश्यमाध्यमबाट निगरानीमात्रै गर्दैछनन्, नर्देशनसमेत दिन्छन् । ‘तिमी केटाहरूले संकटको समयमा पार लगाउन सक्छौं, कि सक्दैनौं, नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्छौं, कि सक्दैनौं भनेर जिम्मा नै दिनुभएको छ पुन सरले’, आविष्कार केन्द्रमा संयोजन गरिरहेका एक इञ्जिनीयर शंकर ढकालले भने ।
कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा महत्वपूर्ण काम भइरहेकोछ । विश्व व्यापीरूपमा नै कोरोनाको महामारी बढ्दै गएको बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षासामग्री (पीपीई) उत्पादन गरिरहेको छ केन्द्रले । पीपीई मिलाउने र पट्याउने काममा विगत १० दिनदेखि खटिइरहेका पर्वतका अमबहादुर रोकालाई पनि संकटको समयमा दिनरात नभनी कामगर्दा पनि थकाइको महसुस भएको छैन ।
कोभिड–१९ लागेका मानिसकालागि खाना औषधि पु¥याउन रोबोट बन्दैछ । सो कार्यकालागि इन्जिनीयर सुरजकार्की, किरण रौनियार, रिकेशदेव, राम चौधरी लगायत छ जनाको समूहले काम गरिरहेको छ । फ्याकिएका ट्रलीको सदुपयोग गरिएको छ ।
बाहिरबाट मालसामान ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छैन । फ्याकिएका सामाननै प्रयोग गरेर रोबोट तयार हुँदैछ । सोमवार डेमो गरिसकिएको छ । ‘स्वचालित बनाउनका लागि आवश्यक प्रणाली जडान हुँदैछ, अब केही दिनमा तयार पाछौं, यसले बिरामी जहाँ हुन्छ त्यहाँ खाना र औषधि लिएर जान्छ, मानिस गइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन’, ढकालले भने ।
रोबोट अबको तीनदिनमा तयार हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीबलको बलम्बुस्थित अस्पतालमा विभिन्न तीन तल्लामा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने स्थान बन्दैछ । आईसीयू तयार हुँदैछ ।
वीरेन्द्र सैनिकअस्पताल, टेकु अस्पताल सबै क्षेत्रमा १५ देखि २०ओटा रोबोट तत्कालै आवश्यक परेको छ । मागपनि उत्तिकै आइरहेको छ, केन्द्रलाई । कोरोनाको उपचार गराइरहेका बिरामी र चिकित्सकबीच कुनै पनि समयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क नहोस्, खाना तथा औषधि पुर्‍याउनसमेत सहज होओस् भनेरनै रोबोट तयार पारिएको इन्जिनीयर कार्कीले बताए ।
इन्जिनीयर गौरवदासको चटारो पनि उस्तै छ । दासलगायतको समूहलेसब्जी कोठी बनाइरहेको छ । किसानले तरकारी १० देखि४० दिनसम्म जस्ताकोतस्तै राख्न सक्छन् कोठीमा । गाडीबाट घरघरमा पु¥याएर विक्रीगर्न समेत सकिन्छ । त्यसमा डिसइन्फेक्सन च्याम्बर राखिएको छ । त्यसले जुनसुकै भाइरस पनि मारिदिन सक्छ । त्यसभित्र एकप्रकारको कृत्रिम ओजनतह बनाइएको छ ।
‘योसँगै गौरवकै नेतृत्वमा पीपीई, ग्लोब्स, मास्क डिसइन्फेक्सन गर्ने यन्त्रको आविष्कार गरिरहेको छ । काम अन्तिमचरणमा रहेको छ । एकप्रकारको अल्ट्राभाइलेटरेयुक्त (यूभी) बनाइँदैछ । त्यो झण्डै ओभन जस्तै हुन्छ । केहीदिनमा तयार हुँदैछ’ दासले भने ।
त्यसभित्र एकप्रकारको बक्सा हुन्छ । त्यहाँ राखेपछि एकपटक प्रयोग गरिएका सामान फेरि प्रयोग गर्न सकिने गरी भाइरस रहित बनाइन्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षात्मक सामग्रीको अभाव भइरहेको बेलामा निर्मलीकरण गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्ने ओभन जस्तै यूभी बनाउन लागिएका दासले जानकारी दिए ।
जनकपुर निवासी २६ वर्षका गौरव मेकानिकल इन्जिनीयर तथा जुनियर वैज्ञानिक पनि हुन् । दुईओटा शोधको त उनीसँग ‘प्याटेन्टराइट’ नै छ । सब्जी कोठी र दर्जी उनको प्याटेन्टराइट भएका अविष्कार हुन् । दास थापाथली इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थी हुन् ।
स्यानिटाइजिङ टनेल पनि गौरवकै नेतृत्वमा बनिरहेको छ । के छ त यसको विशेषता ? हाम्रो प्रश्न थियो, दासलाई । बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य कर्मचारीले आवतजावतगर्दा, बाहिर गएर आउँदा त्यो टनेलले पूरै शरीर ‘स्यानिटाइज’ गर्छ । त्यस्तै खालको टनेल टेकु अस्पतालमा जडान गरिएको छ । त्यो आयातित हो । दासको समूहले फालिएका र काम नलाग्ने सामग्रीबाटै टनेल बनाएको हो ।
सो मेसिनले हातमा स्यानिटाइजर गरेझैं पूरै यसबाट शरीरलाई स्यानिटाइज गर्न सकिन्छ । जसलेगर्दा एकमानिसबाट अर्को मानिसमा भाइरस सर्न पाउँदैन । मेसिनलेनै शरीरमा एकैचोटी स्वानिटाइज गर्ने प्रविधि यसमा जडान गरिएको छ ।
आविष्कार केन्द्रमा निर्माण भइरहेको अर्को सामग्री हो एम्बु ब्याग । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा अक्सिजन दिँदा म्यानुअल पम्पिङ गर्ने गरिन्छ । अस्पतालमा अब यो तयार भएपछि मेसिनले अटोमेटिक रूपमा पम्प गर्छ । भेन्टिलेटरमा यो खालको मेसिन राख्दा झनै प्रभावकारी हुन्छ ।
अस्पतालमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा बिरामी लैजाँदा एम्बु व्यागले ठूलो काम गर्छ । गम्भीर बिरामीलाई अक्सिजन पम्पिङ गर्दा हात प्रयोग गर्नु पर्दैन । सिधै मेसिनले गर्न मिल्ने गरी यो बनाउन लागिएको हो । हाल त्यस्तो खालको ब्याग देशभरी जम्मा ५०० मात्रै होला ढकालको दाबी छ ।
कोरोनाको शंका लागेका बिरामीको स्वाब परीक्षणका क्रममा सबैभन्दा बढी संक्रमणको जोखिममा चिकित्सक नै हुन्छ । उपचारका क्रममा बिरामीले वाकवाक गर्छ, ह्याच्छयूँ गर्छ, त्यसबेला त्यो थुक चिकित्सक नर्ससम्म आउन नदिनका लागि नयाँबाकस आविष्कार गरिएको ढकाल बताउँछन्, जसकोनाम ‘एरोसल बक्स’ राखिएको छ । एउटा बाकसमा सिसा लगाइएको हुन्छ ।
हात छिर्न मिल्ने गरी दुईओटा प्वाल बनाइएको छ । बिरामी बेडमा रहेको बेलामा आवश्यक परीक्षण र उपचारका क्रममा यो बक्स प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न अस्पतालबाट यसको माग भइरहेको छ । चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र शिक्षण अस्पतालबाट समेत माग आइसकेका छ ।
केन्द्रले तयार पारेको अर्को आविष्कार हो, पीपीई बुथ । कोरोना भाइरस स्याम्पलकलेक्सन बुथ (पीपीई बुथ) को रुममा पनि त्यसलाई लिन सकिन्छ । यो एउटा ठूलो बक्सा हो । बक्साभित्र चिकित्सक बस्छन् ।बक्साको एकभागमा सिसा राखिएको हुन्छ । सिसामा दुईओटा हात छिराउन मिल्ने प्वाल राखिएको छ । रबर पञ्जामा पीपीईको कपडा जोडेर बनाइएको नयाँ पञ्जा त्यस प्वालमा जोडिन्छ ।
त्योभन्दा बाहिर प्लाष्टिकको नयाँपञ्जा प्रयोग हुन्छ । हातछिराएर पञ्जामार्फत चिकित्सकले बिरामीको आवश्यक परीक्षण गर्न सक्छन् यसरी परीक्षण गर्दा सिसाबाट भाइरसभित्र छिर्न पाउँदैन ताकी चिकित्सकसम्म भाइरस जान पाउँदैन र सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । विश्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रोग सरेको र कयौंको मृत्युसमेत भइसकेको अबस्थामा यसले रोग सर्नबाट रोक्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास गरिएको ढकालको भनाइ छ ।
उक्त बुथको अर्को साइटमा छ मिटर लामोपाइप राखेर उपयुक्त फ्यान राखिएको छ । जसले दूषित हावा बाहिर फाल्छ भने ताजा हावा चिकित्सकसम्म पु¥याउँछ । कतिपयठाउँमा प्रयोग गरिएको बुथहरू सुरक्षात्मक नभएकाले हटाउन भनिसकिएको ढकालले बताए ।
आविष्कार केन्द्रमा पीपीईको विज्ञ कोही पनि थिएनन् तर अवस्थाले पीपीई विज्ञ बनाइदियो । समस्या आइसकेपछि पीपीईबाट काम शुरु गर्ने निर्णय भएको ढकालको भनाछ । ‘त्यसको माग बढी थियो । चिकित्सकनै संक्रमित भए भने धेरैलाई प्रभावित पार्न भयो भनेर हामीले त्यसको अनुसन्धान थाल्यौं’, ढकालले भने, ‘वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट नमूना मगाएर हेरियो ।
त्यो हेर्दा वाटर पेनिटेसन थिएन । पानी छिर्ने भेटियो । त्यसपछि अनुसन्धान टोलीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइनका अध्ययन गरयो ।’ गाइडलाइनमा भनिएको थियो वाटर प्रुफ्ट, एयर प्रुफ्ट र भाइसर प्रोटेक्टिभ हुनुपर्छ पीपीई । त्यसपछि हामीले कुन कपडा कस्तो छ भनेर हामीले खोजी गर्‍यौं । डबललेयर, रबराइज, टाफेटा भन्ने फ्यावरिक पत्ता लाग्यो । यो फेवरिक जापानको उत्पादन हो । कम्पनीलेनै भाइरस प्रोटेक्टिभ भनेर प्रमाणित गरेको कपडा हो ।’
पहिले प्रयोग भइरहेका पीपीईमा हाईप्रेसरमा पानी पठाउँदा पानी पस्ने गरेको पाइयो भने यो पीपीईमा भने जतिप्रेसर गर्दा पनि पानी नपसेको ढकालको भनाइ छ । गुणस्तर विभागले मापदण्ड हेरेर ठीक छ भनेको छ । केन्द्रले विभागलाई नमूना दिएर आवश्यक प्रस्तुति गरेरै काम गरेको हो ।
पीपीई आवश्यक डिजाइन गरेर निश्चित टेलरमा सिलाउने गरिएका छ । विभागको सुझावको आधारमा पानी नपस्ने खालको र एयर प्रुफजीफर प्रयोग गरिएको छ । ‘सकेसम्म कमसिलाउने गरिएको छ । सिलाएको ठाउँमासमेत पानी र हावा छिर्न नसक्नेगरी टेप लगाइएको छ । सकेसम्म साइन्टिष्ट र मेडिकल विद्यार्थीबाट मेहनत गरेर बनाएका छौं’, ढकालले भने ।
अहिलेसम्म २ हजार ८०० भन्दाबढी बनाएर निःशुल्करूपमा वितरण गरिसकेको छ, केन्द्रले । सातै प्रदेश र ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ केन्द्रको पीपीई । माग बढ्दो छ । अझै तीन÷चार हजार माग छ ढकालले आँकडा सनाए । उनले भने, ‘टेपरजिफर सरकारले उपलब्ध गराइदियो भने नेपाललाई चाहिने सबै पीपीई हामी उत्पादन गर्न सक्छौं ।’ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एउटा स्टाण्डर्ड (गाइडलाइन) निकालेको छ ।
यो निकालेपछि यसैलाई फलोगरेर अन्यठाउँबाट पनि उत्पादन शुरु गरिएको छ । यही हाम्रो गाइडलाइनबाट बनिरहेका छ । एम्बुलेन्स चालककालागि पनि छुट्टै पीपीई बनाइएको छ । २००भन्दा बढी चालकले लगिसकेका छन् ।
त्रिविवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल,टेकु, आर्मी अस्पताल, सशस्त्रप्रहरी अस्पताल तथा निजी अस्पताल सबैलाई पीपीई दिइएको ढकालले बताए । अझै माग आइरहेको छ । हामी दैनिक १८ घण्टाबढी खटेर पीपीई बनाइरहेका छौं’, ढकालल भने, ‘कुन अस्पतालाई चाहिन्छ,के कति मात्रामा माग छ भन्ने कुरा महावीर पुनले नै तथ्यांक लिनुहुन्छ, र यहाँ पठाउनुहुन्छ ,हामी सोहीअनुसार दिएर पठाउँछौं।’
पीपीईमा जापानीज फेबरिक प्रयोग हुन्छ, त्यसमा पनि डबल लेयर्ड रबराइज हुनुपर्नेछ, काट्ने र सिलाउने ठाउँ कम गरिएको छ । काटेको ठाउँमा टेपिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने, जिफर हावा र पानी नछिर्ने हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
काठमाडौंमै बस्ने पर्वतका अमबहादुर रोक्का पनि पीपीई पट्याउँदै थिए । उनी ९ दिनदेखि स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्न यहाँ काम गर्न आएका, सेवा भनेको दुःख पर्दा हो सुख पर्दा जसले पनि गर्छ । यही भएर सेवा गर्न मन लागेका छ । यहाँ यसरी झण्डै २० जनाले काम गरिरहेका छन् ।
रातदिन नभनी कामभइरहेको केन्द्रलाई सरकारलेआवश्यक सहयोग उपलब्ध गराए कोरोना नियन्त्रणकालागि विदेशबाट सामान आयात गर्नै नपर्ने ढकालको दाबी छ । हालसम्म सबै सामग्री निःशुल्क दिइएको छ । अमेरिका– नेपाल चिकित्सक सोसाइटीले केही सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यस्तै नेपालभित्रका केहीदाताले सक्दो सहयोग गरेका छन् ।
सोही सहयोगका आधारमानै केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणकालागि सक्दो सहयोग गरेको छ । सरकारले आफूहरूलाई साधन र स्रोत उपलब्ध गराए देशभित्रै स्वास्थ्य सामग्री बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै ढकालले नेपाली युवा वैज्ञानिकको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । रासस